Sumo Blind Massage | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Sumo Blind Massage | Lanmadaw
Sumo Blind Massage ဆိုင်ကို အမှတ် B 15 ၊ လမ်းမတော် ပလာဇာ ၊ သံဈေး ဝင်ပေါက်အနီး ၊လမ်းမတော်လမ်းမ ၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ SUMO မျက်မမြင် အကြောပြင်ခန်းမတွင် ကျွမ်းကျင်သော မျက်မမြင်များမှ အထူးအကြောပြင် ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ၊ အကြောတက်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ အားကစားပြု လုပ်ခြင်းနှင့် ရုံးအလုပ်များခြင်းကြောင့် ပင်ပန်းနွယ်းနယ်နေပါက လာရောက်အပန်းဖြေသင့်သော Massage ဆိုင်လေးဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်တွင် အကြောပြင် ကုသမှုခံယူခြင်း အနေဖြင့် ၁ နာရီ = 5000/- ကျပ် နှင့် အိမ်အရောက် ဝန်ဆောင်မှု အနေဖြင့် ၁ နာရီ = 10,000/- ကျပ် + Taxi + ခရီးကြာချိန် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါသည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အခမ်းအနား အပြင်အဆင်မှာလည်း အထူးသပ်ရပ်လှပပါသည်။ သာမာန်ညောင်းညာမှုမှစ၍ ကျီးပေါင်း၊ လေဖြတ် ဝေဒနာများထိ သက်သာပျောက်ကင်း စေဖို့ ဂျပန်မြန်မာ အကြောပြင်အနှိပ်ပညာ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရ မျက်မမြင်ပညာရှင်များ ၀န်ဆောင်မှုပေးသော Sumo Blind Massage လေးပဲဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ကိုးနာရီ မှ ည ကိုးနာရီအထိ ဖြစ်ပြီး ပိတ်ရက်မရှိပါ။ သွားရောက် သင့်သော နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုပါရစေ။
No. B-15, Lanmadaw Plaza, Lanmadaw Road, Lanmadaw Township, Yangon.
အနီးအနား လမ်းမတော်ပလာဇာ မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Sumo Blind Massage Sumo Blind Massage is located at No. B-15, Lanmadaw Plaza, Lanmadaw Road, Lanmadaw Township, Yangon since 2017 March. Massages carried out by the professional blind massage therapist from SUMO blind massage. They provide services of Body massage by professional blind staffs. Special treatment for Head-ache, shoulder pain, neck pain, joint pain, whole body pain, back pain, tried in work, stress, sole pain/crick in Scapula. They offer separate rooms for both gender and staffs. Massage fee in the shop for 1 hour is 5000/- kyats, massage at your home will be 1 hour for 10000/- kyats + Taxi charges + Travel Time. Open 9:00 AM to 9:00 PM daily with no rest days. Blind massage hasareputation for being quite heavy, good for getting rid of any aches from bumping and, after the initial pain, your body will feel renewed and refreshed. You are invited to visit and enjoy to this massage shop once.
Super Star Wedding Dress